आहा ! कति सुन्दर सफा दाँत भन्ने बनाउँन मन छ ? आजै अपनाउँनुहोस् यी उपाय – Anurag Post
Home / स्वास्थ्य / आहा ! कति सुन्दर सफा दाँत भन्ने बनाउँन मन छ ? आजै अपनाउँनुहोस् यी उपाय
Anurag Post December 14, 2019	स्वास्थ्य Leaveacomment 231 Views
काठमाडौं । दाँतले अनुहारको सौन्दर्यता निखारेर ल्याउँछ । यदि दाँत राम्रो नभएमा अनुहारको सौन्दर्यतामा अलि मन्दी आउँछ । त्यसैले दाँतलाई सधै सफा राख्नु पर्छ । फोहोर दाँतले सुन्दरतालाई कम गर्नुका साथै वि–भिन्न रोगहरु पनि निम्त्याउँछ । यसले मुख गनहाउँने, गिजाबाट रगत बग्ने, गिजा दुख्ने जस्ता समस्या पनि हुन सक्छन् । त्यसैले दाँतको सरसफाईमा बिषेश ध्यान दिनु पर्छ । दाँतको सफाई निम्न अनुसारले गर्न सकिन्छ ।
१, खाना खाइसकेपछि दिनहुँ गाजर खाने गर्नाले पनि दाँतको पहोलो पन हट्छ । गाजरमा रहेको रेसाहरुले दाँतलाइ राम्रो संग सफा गर्न मद्दत गर्दछ । साथै नीमको उपयोग धेरै पहिलेदेखी नै दाँतको सफाईका निम्ति गरिदै आएको छ ।
यसमा दाँत सेतो बनाउने र दाँतमा लाग्ने कीराहरूलाई नष्ट गर्ने शक्ती रहेको छ । यो प्राकृतिक रुपमा नै एन्टी व्यक्टेरियल र एन्टी सेप्टिक गुणकारी बनस्पती हो । दिनहुँ निमको दतिवनले दाँत सफा गर्ने हो भने कुनै किरा लाग्दैन र रोग लाग्ने सम्भावन रहँदैन । पहेलो त यसले रहनै दिँदैन ।
२, एक दाना कागतीको रस निकालेर त्यसमा जति रस छ त्यति नै मात्रामा पानी मिसाउनु होस् । खाना खाइ सकेपछि यसले हल्का मालिस गर्दै दिनहुँ कुल्ला गर्नुहोस् । यसो गर्दा दाँतको पहेलोपना त हट्छ नै सास गनाउने समस्यामा पनि यो रामवाण सिद्ध छ ।
३, स्ट्रबेरी दाँत चम्किलो बनाउने सबै भन्दा मिठो र सजिलो उपाय हो । यसमा पाइने एसिडले दाँतलाइ सेतो र चम्किलो बनाउँछ । केरालाई पिसेर यसको धुलो बनाउनु होस् । यसको धुलोले दाँतलाइ दिनहुँ एक मिनेट मसाज गर्नुहोस, मसाज पछि ब्रश गर्नुहोस् । यो तरिका दिनहुँ गर्नाले दाँतको पहेलोपन हटेर जान्छ ।
४, हाम्रो गाउघरतिर नुन र तेलले दाँत सफा गर्ने चलन अझै पनि छ । नुनमा २–४ थोपा शुद्ध तोरीको तेल मिलाएर दाँत सफा गर्नाले केही दिनमै दाँतको पहेलोपना हटेर जान्छ । सुन्तलाको बोक्रा र तुलसीको पातलाई घाममा सुकाएर त्यसको पाउडर बनाउनु होस् । दाँत ब्रश गरिसकेपछि उक्त पाउडरले दाँतमा हल्का मसाज गर्नुहोस् । सुन्तलाको बोक्राबाट प्राप्त हुने भिटामिन सी र क्याल्सियमका कारण दाँत चम्किन केही दिन मात्र लाग्छ ।
Previous पाथिभरा माताको दर्सन गरि आजको राशिफल हेर्नुहोस / २०७६ कार्तिक ०१ गते शुक्रबार
Next कलाकार दीपक क्षेत्री र केशव भट्टराईलाई श्रद्धाञ्जलि दिन पुगेका कलाकारहरु र परिवारको रुवाबासी (भिडियो)
काठमाडौ । क्यान्सर एक यस्तो रोग जसको पुरा विश्वलाई छोडेको छैन । क्यान्सर शरीरको कुनै …